मुटुरोगीका लागी लाभदायक लसुनको पात - Kantipath.com
मुटुरोगीका लागी लाभदायक लसुनको पात
लसुनको पातमा स्वाद त छदै छ स्वास्थका लागि पनि उतिकै फाइदा जनक मानिन्छ । यो स्वादमा अतिनै मिटो हुने गर्दछ । प्राय मानिसहरुको भान्सामा नियति प्रयोमा आउने गर्दछ । लसुन एउटा कन्दमुलको तर धेरै मानिस हरुलाई थाहा छैन यसको सेवन गर्दा हाम्रा् शरीरलाई कति फाइदा हुन्छ भनेर यस्ता छन्।
लसुनको पात खानुका फाइदा लसुनका पोटी अर्थात् केस्राले तरकारी स्वादिलो बनाउने मात्र होइन पेट सम्बन्धि विभिन्न विकार पनि हटाउँछ । लसुनका पोटी अर्थात् केस्राले तरकारी स्वादिलो बनाउने मात्र होइन पेट सम्बन्धि विभिन्न विकार पनि हटाउँछ। यसमा एलि सिन भन्ने तत्व हुन्छ जसले रोग प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि गराउँछ।
लसुनका पातको सेवन मुटुका लागि समेत लाभदायी हुन्छ । यसमा पाइने पोलीसल्फाइड तत्वले मुुटुका विभिन्न रोगबाट बचाउँछ । यसले सरीरमा कोलेस्टेरोलको मात्रा नियनत्रण गर्छ र मुटु तथा रगत सम्बन्धी समस्या कम गर्छ। पेट तथा पाचन प्रणाली सम्बन्धि संक्र मण पनि कम गर्छ। साथै चिसो तथा रुघा खोकीको उपचारमा पनि लसुनको पातको सेवन कामयावी हुन्छ।
Previous Previous post: गुडविल फाइनान्सद्धारा १० प्रतिशत लाभांश
Next Next post: वडा अध्यक्षकाे दादागिरी, अध्यारोमा टर्च बालेर सुत्केरी गराउनुपर्ने बाध्यता
आहानाद्वारा खानीखोलालाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग
बैतडीमा यात्रुको पनि कोरोना परीक्षण
उदयपुरमा घट्दै कोरोना सङ्क्रमण
कालिकोटमा कोरोना परीक्षणको दायरा बढाइने
गर्भवतीलाई सामग्री वितरण
ट्राफिक प्रहरीलाई स्वास्थ्य समाग्री सहयोग
बर्दिवास अस्पतालमा एक हजारबढी पिसीआर परीक्षण
मोर्गन कलेजमा भएको घटनाप्रति हिसान, काठमाडौँको ध्यानाकर्षण
इक्यानको अनलाइन शैक्षिक मेला हुँदै
राजधानी बाहिर मुटुको उपचारमा अग्रणी बन्दै चितवन मेडिकल कलेज
‘गाउँघरमा चिकित्सक’ कार्यक्रम सञ्चालनमा
को बन्ला कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति ? यी हुन् २१ प्रतिस्पर्धी
काबुलमा विस्फोट पाँच व्यक्तिको मृत्यु
सात अर्ब २० करोड सहयोग गर्ने विश्व बैंकको घोषणा
१५ दिनदेखि टेलिफोन सेवा अवरुद्ध
२७ वर्षीय पोर्न स्टार डकोटा मृत भेटिइन्
दाइजो नल्याएको भन्दै नवदुलहीमाथि निर्घात कुटपिट
गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा पोखरेल नियुक्त
ब्याड राख्ने बेलामा धानको बीउ अभावः भारतीय बजारमाथि किसान निर्भर
युरो कपको सानदार सुरुवात : टर्की विरुद्ध इटालीको ३ गोल
कांग्रेस सांसदको धम्की ‘ओली विरुद्ध गोड्से बन्न तयार छु’ (भिडियोसहित)
स्नातक तहका परीक्षाको बाँकी नतिजा एक हप्ताभित्र ल्याउने तयारी
यसरी बनाइएको थियो महात्मा गान्धीको हत्या योजना
‘गोड्से’ बन्ने अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर आत्मालोचना गर्न वैद्यलाई पार्टीको निर्देशन
राउटे युवतीमाथि भएको यौन दुर्व्यवहारका भिडियो युट्युबबाट हटाउन अदालतको आदेश
ओलीको वक्तब्य जालसाँजीपूर्ण र झुटको पुलिन्दा : जगन्नाथ खतिवडा
माधव पक्षको स्थायी समिति बैठक बस्दै : लगत्तै धारणा सार्वजनिक हुने !
बृहत् कम्युनिस्ट मोर्चा बनाउने तयारीमा नेपाल
आज ९५ औँ स्थानको जोर्डनसँग भिड्दै नेपाल
नेपाल आयल निगमले आफ्नै बोटलिङ प्लान्ट निर्माण गर्ने
आफ्नालाई राजदूत बनाउन निर्देशिका नै संशोधन, स्नातक पास नभए पनि चल्ने !
रुपन्देहीमा माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ता काेराेना शव व्यवस्थापन र संक्रमितको सेवामा अग्रसर
अवैध उत्खनन गरिरहेका एक्जाभेटर छुटाउन जनप्रतिनिधि सक्रिय